အင်္ဂလန်ရှုံးပွဲကြောင့် ငိုနေခဲ့ဂျာမန်ကလေးမလေးအတွက် ပေါင် ၂၅၀၀၀ ကျော် ဘာကြောင့် ရှာပေးခဲ့သလဲ? – Play Maker Sports Journal
ယူရို၂၀၂၀ပြိုင်ပွဲတွင်ဂျာမနီအားရှုံးနိမ့်တဲ့ပွဲစဉ်မှာငိုယိုနေခဲ့တဲ့ဂျာမန်ကလေးမလေးအတွက်ရန်ပုံငွေပေါင်၂၃၂၈၅ရှာဖွေပေးခဲ့ရတဲံအကြောင်းရင်းကို JustGiving စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်သူကဖွင့်ဟပြောကြားမှုပြုလုပ်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်းဝေးလ်နိုင်ငံသားဟုချ်ဟာကလေးမလေးတစ်ဦးအဖြစ်သာရှိသေးတဲ့ကလေးမလေးအားဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေမှုအပေါ်ဖြေသိမ့်နိုင်ရန်အတွက် JustGiving တွင်သူမအတွက်ပေါင်၅၀၀ ပေးပြီးနှစ်သိမ့်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ကာအလှူငွေကောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အဂၤလန္ရႈံးပြဲေၾကာင့္ ငိုေနခဲ့ဂ်ာမန္ကေလးမေလးအတြက္ ေပါင္ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ ဘာေၾကာင့္ ရွာေပးခဲ့သလဲ?
ယူ႐ို၂၀၂၀ၿပိဳင္ပြဲတြင္ဂ်ာမနီအားရႈံးနိမ့္တဲ့ပြဲစဥ္မွာငိုယိုေနခဲ့တဲ့ဂ်ာမန္ကေလးမေလးအတြက္ရန္ပုံေငြေပါင္၂၃၂၈၅ရွာေဖြေပးခဲ့ရတဲံအေၾကာင္းရင္းကို JustGiving စာမ်က္ႏွာဖြင့္လွစ္သူကဖြင့္ဟေျပာၾကားမႈျပဳလုပ္လာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္းေဝးလ္ႏိုင္ငံသားဟုခ်္ဟာကေလးမေလးတစ္ဦးအျဖစ္သာရွိေသးတဲ့ကေလးမေလးအားဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္ေနမႈအေပၚေျဖသိမ့္ႏိုင္ရန္အတြက္ JustGiving တြင္သူမအတြက္ေပါင္၅၀၀ ေပးၿပီးႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္စာမ်က္ႏွာဖြင့္လွစ္ကာအလႉေငြေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။